आयो नयाँ प्रविधि मोवाइलबाटै एक अर्काको यौन अंग छुन र सेक्सको आनन्द लिन सकिन्छ ! – Todays Nepal
आयो नयाँ प्रविधि मोवाइलबाटै एक अर्काको यौन अंग छुन र सेक्सको आनन्द लिन सकिन्छ !
विज्ञानले चमत्कार गर्दै जाँदा समाजमा ठुला उलटफेर हुन थालेका छन । हलिउड चलचित्रमा नपत्याइरनपत्याई हेर्नु पर्ने दृश्यहरु साच्चिकै संभव हुन थालेपछि तपाई हाम्रा रौं ठाडो हनु कुन चैं अनौठो कुरा भो र ?
केही समय अघि सम्म चलिचत्रमा मात्र संभव मानिएका कुरा अन ‘रियल’ जीवनमा पनि संभव हुन थालेका छन् । कण्डम बनाउने चर्चित कम्पनी ड्युरेक्सले एउटा गजवको प्रविधी विकास गरिदएको छ, जसको सहयोगले प्रेमी जोडीहरुले एकै ठाँउमा नभएपनि एक अर्कालाई छुन र सेक्सको आनन्द लिन सक्दछन् । ड्युरेक्सले कम्पनीले अत्याधुनिक अण्डरवेयर र मोवाइल एप्स मद्दतले यसलाई संभव पारेको हो ।
ड्युरेक्सले यसलाई प्रयोग गर्ने तरिका समेत युट्युबमा राखेका छ, जसलाई १७ लाख भन्दा बढि मानिसले हेरिसकेका छन् ।ड्युरेक्सले बनाएको अण्डवयरलाई फंडावर्यस नाम दिएको छ । यसलाई आइफोनसंग जोडिएको छ। एउटा एप्सको मद्दतले फंडवर्यस आईफोनसंग जोडिएको हो ।
महिला र पुरुषको लागी फरक फरक किसिमको अण्डरवयर बनाइएको छ । अण्डरवर्यसमा सेन्सर लगाइएको छ, जसलाई एप्सको मद्दतले आईफोनले नियन्त्रण गर्न सक्दछ । यसरी भौतिक रुपमा टाढा भएपनि युगल जोडीले आईफोन प्रयोग गरेर एक अर्काको यौन अंगको फरक फरक स्थान छुन सक्दछन् ।ड्युरेक्स कम्पनीले अझै पनि यसमा प्रयोग जारी रहेको जनाएको छ । यसलाई छिट्टै बजारमा ल्याइने बताइएको छ ।
फुटेको राप्रपालाई जोडेर राजसंस्था पुन:स्थापना गर्ने अभियानमा खुलेर अघि बढे पुर्वराजा
नागरिकताको लोभमा अमेरिकामा बच्चा जन्माउँदै नायिकाहरु